गृहपृष्ठ » मनोरञ्जन » ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ मा ठूलो परिवर्तन, दयाबेनको स्थान कसले लिने ?
काठमाडौं । चर्चित टेलिभिजन शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ विगत १२ वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको छ ।
शोसँग सम्बन्धित हरेक साना ठूला परिवर्तनलाई लिएर मानिसमा निकै उत्सुकता छ । आजकल यो शो धेरै हेडलाइनमा छ।
शोका मुख्य पात्र जेठालालका मिल्ने साथी तारक मेहता उर्फ ​​शैलेश लोढा बिदाइ गरेपछि शोका निर्मातालाई ठूलो झट्का लागेको बताइएको छ ।
निर्माण पक्षले शोमा ठूलो परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ । शोका निर्माता असित मोदीले दयाबेनको पुनरागमनसँगै छिट्टै शोमा केही नयाँ अनुहार पनि थपिने बताए । गोकुलधाम सोसाइटीसँगै जेठालालको पसल गडा इलेक्ट्रोनिक्सको पनि रुपान्तरण भएको छ ।
नयाँ रूप दफन इलेक्ट्रोनिक्स
शोमा गडा इलेक्ट्रोनिक्सलाई जेठालालको पसल देखाइएको छ । नट्टु काका र बाघा यस पसलका कर्मचारी हुन् । यो पसल लगभग हरेक एपिसोड मा चित्रित छ।
वास्तविक जीवनमा यो पसल खार, मुम्बईमा अवस्थित छ। यस पसलका मालिकको नाम शेखर गडियार हो । तपाईंले आगामी एपिसोडहरूमा यो पसल फेरि कहिल्यै देख्नुहुनेछैन। अरू सबैजस्तै यो पसलले पनि कोरोना अवधिमा धेरै उतारचढावहरू पार गर्नुपर्‍यो।
शोका निर्माता असित मोदीले बीबीसी हिन्दीसँग कुरा गर्दै भने, ‘हेर्नुहोस्, हामी जहाँ छायांकन गर्थ्यौं, पहिले त्यहाँ समस्या हुन्थ्यो । यो कोभिडको समय थियो र यो एक धेरै आवासीय क्षेत्र थियो।
जसका कारण धेरै संक्रमणका केसहरु आइरहेका छन् । त्यहाँ बस्ने मानिसहरू पनि हामीसँग सुटिङ टोली आउँछ कि भनेर डराउने गर्थे। हामीले सडकमा सुटिङ गर्न सकेनौं, त्यसैले नयाँ सेट बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो ।
अब हामीले तारक मेहताको सेटमा फिल्म सिटी भित्रै पसल बनाएका छौं, जसका कारण अब आरामसँग सुटिङ गर्न सक्नेछौं । लेखनमा केही नविनता होला जसलाई दर्शकले मन पराउनेछन् । नयाँ दया बेनको प्रवेशलाई लिएर यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।
दिशा वकानीले दया बेनको भूमिका निर्वाह गर्ने ?
यस प्रश्नको जवाफ दिँदै असित मोदीले भने, ‘हामी पनि दयाबेनमा पुरानो आओस् भन्ने चाहन्छौं। तर अहिले उनको विवाह भइसकेको छ । पारिवारिक जिम्मेवारी थोरै छ र उनीहरुको परिवारमा छोराको जन्म हुनु खुशीको कुरा हो । छोरी थिइन् । अहिले छोरो भयो, पूरै परिवार बनेको छ । ,
‘पारिवारिक जिम्मेवारीका कारण आउन नसकेपछि अर्को दयाबेन खोज्नेछौं । म र मेरो टोलीले जे पाउँछु दर्शकले मन पराउनेछन् भन्ने वाचा गर्छु । हामी मनोरञ्जन दिन सक्दो प्रयास गर्नेछौं।
दयाबेनको प्रवेशसँगै दोस्रो ठूलो परिवर्तन शोका स्टार अर्थात् शैलेश लोढाको प्रस्थान हो।
यसबारे असित मोदी भन्छन्, म शो छोडेर गएका मानिसहरूसँग रिसाएको छैन। जबसम्म उनी त्यहाँ थिए उनले राम्रो काम गरे। मैले उनीहरूलाई धेरै बुझाएँ कि तिमी अहिले नछोड् । तर मानेनन् ।
म छोडेकाहरूलाई धन्यवाद दिन्छु किनभने उनीहरूले शोमा योगदान गरेका छन्। उनले शो छाड्नुहुँदैन थियो, म सधैं यही भन्छु । तर यो ठीक छ, नयाँ मान्छेहरू थप ऊर्जा लिएर आउँछन्। धेरै मेहनत गर्नेछन् ।
नयाँ अनुहारहरू देखा पर्नेछ
असित मोदी भन्छन्, शोमा आउने सबै नयाँ अनुहारहरू, चाहे त्यो हाम्रो सोडी भाइ होस् वा सोनू होस् वा हाती भाइ होस्, सबैले कडा मेहनत गर्छन्। म भन्छु पुरानाको ठाउँमा नयाँ आएकालाई पनि धेरै माया दिनुस् ।
हामी छोडेकाहरूलाई पुनर्मिलन गर्न चाहन्छौं। सायद उनीहरुको केही सीमा होला, बाध्यता होला । आउने दर्शकलाई माया गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु । म वाचा गर्न सक्छु कि उहाँले तपाईंलाई धेरै मनोरञ्जन दिनुहुनेछ।
नट्टु काकाको सम्झना
शोको महत्वपूर्ण पात्र नट्टु काकाको भूमिका निर्वाह गरेका अभिनेता घनश्यामको क्यान्सरका कारण निधन भएको छ । कार्यक्रममा दिलीप जोशीले जेठालालको भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
बीबीसी हिन्दीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनी भन्छन्, ‘हाम्रो शोको नयाँ पसलमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै मैले बाघा भाइ अर्थात् तन्मय नट्टु काकालाई धेरै मिस गरिरहेको थिएँ । हामीले पनि सीन गर्दा उहाँलाई धेरै मिस गर्‍यौं। असित भाइलाई सधैं भन्नुहुन्थ्यो साथी टाढा छ, यहाँ कतै पसल बनायौं भने सबैलाई धेरै राम्रो हुन्छ, तर त्यतिबेला मैले त्यस्तो केही सोचेको थिइनँ ।
मलाइका अरोरासँगको सम्बन्धलाई लिएर अर्जुन कपुरले भने– माया गर्छौ भने परिणाम भोग्नुपर्छ
प्रशान्त तामाङ छिट्टै बाबु बन्दै, श्रीमतीलाई दिए उदाहरणीय माया
बुढी कन्या बसेकी सुष्मिता भन्छिन् बिहेका लागि महामानव भनिएका तीन जना आए, तर भगवानले बचाए
के छ यस्तो र अभिनेत्री अङ्कितालाई भनियो आफूलाई सहज हुने लुगा त लगाउनुहास्
दक्षिण भारतका यी ५ अभिनेता जो वास्तविक जीवनमापनि यसकारण नायक भनेर पुकारिन्छन्
बहुचर्चित फिल्म केजीएफका अभिनेताको भयानक कार दुर्घटना
अभिनेत्री पूजा शर्माका हात थाम्न आएका नयाँ प्रेमी को हुन् ?
अमेरिकाबाट ८ वर्षपछि नेपाल आएकी अरुणिमा लम्साल झनै आकर्षक, प्रियांका समेत लोभिइन्
तेह्रौँ सन्तानहरुमा कान्छो किरण केसीको जन्मदिन, यसकारण “भर्सटाईल” कलाकार
‘मर्डर’ अभिनेत्री मल्लिका गज्जब स्टाइलमा देखिएपछि फ्यानले भने– यस्तो हुनै सक्दैन
सलमान खानपछि अभिनेत्री स्वरा भास्करलाई ज्यान मार्ने धम्की
सञ्जयकी छोरी त्रिशालाले सेयर गरिन् सबै चकित पार्ने तस्वीर, प्रेमीको निधनपछि डिप्रेशन
म कारमा, त्यही बेला मिस्टर परफेक्शनिस्ट अमिर खान ठोक्किए भन्ने अमिताभको पोष्ट अत्याधिक सेयर